UZITHIYA NJANI KWAKHONA IZIXHOBO ZEBLUETOOTH WINDOWS 10 - ITHAMBILE
Uzithiya njani kwakhona izixhobo zeBluetooth Windows 10
Nanini na xa uqhagamshela isixhobo seBluetooth Windows 10, unokubona igama lesixhobo sakho seBluetooth njengoko kuchaziwe ngumenzi wesixhobo. Ke, ukuba uqhagamshela ii-smartphones zakho okanye ii-headphones zakho, ke igama eliboniswayo ligama lomenzi wesixhobo esingagqibekanga. Oku kwenzeka kubasebenzisi ukuba bachonge kwaye baqhagamshele izixhobo zabo zeBluetooth Windows 10 ngokulula. Nangona kunjalo, unokufuna ukuthiya ngokutsha izixhobo zakho zeBluetooth Windows 10 kuba unokuba nezixhobo ezininzi ezinamagama afanayo. Siyaqonda ukuba inokubhideka ngamagama afanayo ezixhobo zakho zeBluetooth kuluhlu lwakho lweBluetooth. Ke ngoko, ukukunceda, size nesikhokelo sokunceda ukuthiya ngokutsha izixhobo zeBluetooth Windows 10.
Ziziphi izizathu zokuthiya ngokutsha izixhobo zeBluetooth Windows 10?
Iindlela zokuthiya ngokutsha izixhobo zeBluetooth Windows 10
Indlela yoku-1: Qamba kwakhona iDivaysi yeBluetooth ngePhaneli yoLawulo
Indlela yesi-2: Yithiye kwakhona igama leBluetooth lakho Windows 10 PC
Esona sizathu siphambili sokutshintsha i ibluetooth igama lesixhobo Windows 10 kungenxa yokuba xa uqhagamshela isixhobo sakho seBluetooth kweyakho Windows 10 IPC, igama elibonisiweyo liya kuba ligama elichazwe ngumenzi wesixhobo. Umzekelo, ukuqhagamshela i-Sony DSLR yakho akunyanzelekanga ukuba ibonise njengoSony_ILCE6000Y kweyakho Windows 10; endaweni yoko, ungatshintsha igama libe yinto elula efana ne-Sony DSLR.
Sinesikhokelo onokuthi usilandele xa sithiya ngokutsha izixhobo zakho zeBluetooth Windows 10. Nazi iindlela onokuthi uzilandele xa uthiya ngokutsha izixhobo zeBluetooth kwiPC.
Ungasebenzisa le ndlela ukuze uthiye ngokutsha ngokulula isixhobo sakho seBluetooth osiqhagamshela kwesakho Windows 10 PC. Ke, ukuba isixhobo sakho seBluetooth sinegama elihle elintsonkothileyo, kwaye ufuna ukuyiqamba kwakhona into elula, unokulandela la manyathelo.
1. Inyathelo lokuqala ku vula iBluetooth yeyakho Windows 10 PC kunye nesixhobo ofuna ukuqhagamshela kuso.
2. Ngoku, linda zombini izixhobo zakho zeBluetooth ukuba ziqhagamshelane.
3. Nje ukuba udibanise zombini izixhobo ngeBluetooth, kufuneka uvule iPhaneli yoLawulo. Ukuvula indawo yolawulo, ungasebenzisa ibhokisi yencoko yababini yokubaleka. Cofa iqhosha leWindows + R isitshixo sokundulula i Qhuba ibhokisi yencoko yababini kwaye chwetheza ' Iphaneli yokulawula ' uze ucofe u-Enter.
4. Kwiphaneli yolawulo, kufuneka uvule i Hardware kunye nesandi icandelo.
5. Ngoku, cofa apha Izixhobo kunye nabashicileli kuluhlu olubonisiweyo lokhetho.
6. KwiZixhobo kunye neePrinta, kufuneka wenze njalo khetha isixhobo esiqhagamshelwe ukuba ufuna ukuyinika igama kwakhona cofa ekunene kuyo kwaye ukhethe i Iipropati ukhetho.
7. Kuya kuvela ifestile entsha, apho phantsi kwethebhu yeBluetooth, uya kubona igama elingagqibekanga lesixhobo sakho esiqhagamshelweyo.
8. Ungahlela igama elimiselweyo ngokunqakraza kwindawo yegama kwaye uyinike ngokutsha njengokhetho lwakho. Kweli nyathelo, unako ngokulula ithiya ngokutsha isixhobo seBluetooth kwaye ucofe ku Faka isicelo ukugcina utshintsho.
9. Ngoku, cima isixhobo esiqhagamshelweyo ukuba unike elinye igama. Ukusebenzisa utshintsho olutsha, kubalulekile ukuqhawula izixhobo zakho kwaye uzidibanise kwakhona ukuze usebenzise utshintsho olutsha.
10. Emva kokucima isixhobo sakho, kufuneka wenze njalo phinda uqhagamshele isixhobo ukujonga ukuba igama leBluetooth liyatshintsha okanye hayi.
11. Kwakhona vula iPhaneli yoLawulo kwiPC yakho, yiya kwicandelo leHardware kunye neSandi, emva koko cofa kwiZixhobo kunye neePrinta.
12. Phantsi kwezixhobo kunye neeprinta, uya kuba nakho ukubona igama lesixhobo seBluetooth osanda kusitshintsha. Igama elibonisiweyo leBluetooth ligama elitsha elihlaziyiweyo lesixhobo sakho esiqhagamshelwe ngeBluetooth.
Nje ukuba utshintshe igama lesixhobo sakho seBluetooth esiqhagamsheleneyo, ke eli ligama oza kulibona nanini na xa uqhagamshela isixhobo seBluetooth Windows 10. Nangona kunjalo, kukho amathuba okuba umqhubi wesixhobo ufumana uhlaziyo, ngoko iBluetooth yakho. Igama lesixhobo liphinda limiselwe kokumiselwayo.
Ngaphezu koko, ukuba ususa isixhobo sakho seBluetooth esiqhagamshelwe kuluhlu oludityanisiweyo, kwaye uyibhanqe kwakhona windows 10, emva koko uya kubona igama elingagqibekanga lesixhobo sakho seBluetooth, onokuthi uphinde uyithiye kwakhona ngokulandela la manyathelo angasentla.
Ngaphaya koko, ukuba utshintsha igama lesixhobo sakho seBluetooth kweyakho Windows 10 inkqubo, ke igama olitshintshileyo liya kusebenza kuphela kwinkqubo yakho. Oku kuthetha ukuba uqhagamshela isixhobo esinye seBluetooth kwenye Windows 10 IPC, emva koko uya kubona igama elimiselweyo, elichazwa ngumenzi wesixhobo.
Kwakhona Funda: Lungisa iVolume ephantsi yeBluetooth kwi-Android
Ngale ndlela, ungalibiza igama leBluetooth lakho Windows 10 IPC eboniswa kwezinye izixhobo zeBluetooth. Ungalandela la manyathelo kule ndlela.
1. Inyathelo lokuqala kukuvula i Iisetingi app kweyakho Windows 10 inkqubo. Yale, Cofa iSitshixo seWindows + I ukuvula Useto.
2. Kuseto, kufuneka ucofe kwi Inkqubo icandelo.
3. Kwicandelo lenkqubo, khangela kwaye uvule i 'Malunga' ithebhu kwiphaneli yasekhohlo yesikrini.
4. Uya kubona ukhetho lwe Yithiye ngokutsha le PC . Cofa kuyo ukuze unike igama kwakhona Windows 10 PC.
5. Kuya kuvela iwindow, apho unakho ngokulula chwetheza igama elitsha lePC yakho.
6. Emva kokuba uyinike igama kwakhona iPC yakho, cofa ku Okulandelayo ukuqhubeka.
7. Khetha ukhetho lwe qalela ngoku.
8. Nje ukuba uqalise kwakhona iPC yakho, unokuvula useto lweBluetooth ukujonga ukuba kukho i utshintsho kwigama lakho elifumanekayo leBluetooth.
UngaQhagamshela njani isixhobo seBluetooth Windows 10
Uzilungisa njani iingxaki zeBluetooth Windows 10
Uzidlulisela njani iifayile kwiNdawo yoGcino lwangaphakathi ye-Android ukuya kwiKhadi le-SD
Siyathemba ukuba esi sikhokelo singentla sibe luncedo kwaye ukwazile qamba ngokutsha izixhobo zeBluetooth kweyakho Windows 10 IPC . Ngoku, ungazithiya ngokutsha izixhobo zakho zeBluetooth kwaye uzinike igama elilula. Ukuba uyazi naziphi na ezinye iindlela zokuthiya ngokutsha izixhobo zakho zeBluetooth windows 10, sixelele kwizimvo ezingezantsi.
UPete ungumbhali wabasebenzi oPhezulu kwiCyber ​​S. UPete uthanda zonke izinto itekhnoloji kwaye ukwangu-DIYer okhutheleyo entliziyweni. Uneminyaka elishumi yamava okubhala indlela-tos, iimpawu, kunye nezikhokelo zetekhnoloji kwi-intanethi.